अझै कति दिन हुन्छ त देशभर वर्षा?? - Dainikee News::
अझै कति दिन हुन्छ त देशभर वर्षा??
काठमाडौँ, असार २९। मनसुन वर्षाको प्रभाव देशभरि नै रहेकाले अझै तीन दिनसम्म देशका अधिकांश भेगमा बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तीन दिनको मौसम पूर्वानुमानबारे आज विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरि नै बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम तथा केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५ /Friday, July 13th, 2018, 3:05 pm